I-China single Side Bracket formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Isibiyeli secala elinye yinkqubo yefomwork yokuphosa ikhonkrithi eludongeni olunecala elinye, elibonakaliswa zizinto zalo jikelele, ulwakhiwo olulula kunye nokusebenza okulula nokukhawulezayo. Kuba akukho ludonga-ngokusebenzisa intonga yokubopha, umzimba wodonga emva kokuphosa unobungqina bamanzi ngokupheleleyo. Isetyenziswe ngokubanzi kudonga lwangaphandle kwigumbi elingaphantsi, indawo yokucoca amanzi amdaka, indlela engaphantsi kwendlela kunye nendlela yokhuseleko kunye neebhulorho ecaleni kwethambeka.
Isibiyeli esinamacala amathandathu yinkqubo yefomwork yokuphosa ikhonkrithi eludongeni olusecaleni, olubonakaliswa zizinto zalo, ukwakhiwa okulula kunye nokusebenza okulula nokukhawulezayo. Kuba akukho ludonga-ngokusebenzisa intonga yokubopha, umzimba wodonga emva kokuphosa unobungqina bamanzi ngokupheleleyo. Isetyenziswe ngokubanzi kudonga lwangaphandle kwigumbi elingaphantsi, indawo yokucoca amanzi amdaka, indlela engaphantsi kwendlela kunye nendlela yokhuseleko kunye neebhulorho ecaleni kwethambeka.
Ngenxa yokuthintelwa kwendawo yeziza zokwakha kunye nophuhliso lwetekhnoloji yokukhusela ithambeka, ukusetyenziswa kwesibiyeli esinamacala amabini kwiindonga ezingaphantsi kuya kusiba yinto eqhelekileyo. Njengoko uxinzelelo lwekhonkrithi olungalawulekiyo lungenakulawulwa ngaphandle kodonga oluhamba ngodonga, lubangele ukuphazamiseka okukhulu ekusebenzeni kwendlela. Iiprojekthi ezininzi zobunjineli zamkele iindlela ngeendlela, kodwa i-formwork deformation okanye ukwaphuka kwenzeka ngoku nangoko. Isibiyeli esinecala elinye elenziwe yinkampani yethu senzelwe ngokukodwa ukukhonza isidingo esizeni, kwaye isombulula ingxaki yokuqiniswa kwefomwork. Uyilo lwefomula yamacala-nye inengqiqo, kwaye inezibonelelo zokwakha ezifanelekileyo, ukusebenza ngokulula, isantya esikhawulezayo, ukuthwala umthwalo ofanelekileyo kunye nokugcina abasebenzi, njl. iinxalenye njengebrakethi esecaleni, ifomwork kunye nenkqubo yeankile.
Ngokonyuka koxinzelelo lwekhonkrithi entsha ngenxa yokuphakama kweenkqubo zecala lokwenziwa kweefom ziveliswa ngeentlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi.
Ngokwexinzelelo lwekhonkrithi, umgama wenkxaso kunye nohlobo lwenkxaso luchaziwe.
Inkqubo yeLianggong eyodwa yeFomathi yeFomathi inikezela ngokusebenza ngokukuko kunye nokugqitywa kwekhonkrithi okuhle kakhulu kulwakhiwo kulwakhiwo nakwimisebenzi yoluntu.
Ngokusebenzisa uLianggong oSebenzayo weSakhelo seFomula akukho thuba lokwenza izakhiwo zobusi.
Le nkqubo iqulathe ipaneli yodonga enye kunye neBracket eseMacaleni, esetyenziselwa ukugcina udonga.
Ingasetyenziswa kunye nenkqubo yefomwork yentsimbi, kunye nenkqubo yeplanga yomthi ukuya kuthi ga kwi-6.0m.
Inkqubo yokuSebenza ngaMacala ngaMnye ikwasetyenziswa kwicandelo lekhonkrithi enobushushu obuphantsi. Umz
Egqithileyo Isikrini sokukhusela kunye nePlatform yokuThula
Okulandelayo: I-Hydraulic Tunnel Linning Trolley
Ukugcina iFomwork yaseDongeni